यसकारण मोबाईल ‘डार्क मोडमा’ राखौँ « Lokpath
२०७७, १४ मङ्सिर आईतवार १८:३०
यसकारण मोबाईल ‘डार्क मोडमा’ राखौँ
प्रकाशित मिति : २०७७, १४ मङ्सिर आईतवार १८:३०
काठमाडौं – राति सुत्नु अगाडिसम्म र बिहान आँखा खुल्नासाथै मोबाइल हेर्ने बानी अहिलेका प्रायः सबै मानिसमा हुन्छ । यस्तोमा लगातार फोनको चकिलो स्क्रिन हेर्दा थाकेको हाम्रो आँखाका लागि पछिल्लो समय आएको नयाँ ‘डार्क मोड’ फिचर बरदान साबित हुन सक्छ । आँखालाई फाइदा पुर्याउनुका साथै यसले मोबाइलको ब्याट्रीलाई समेत लामो आयु प्रदान गर्न सक्ने प्राविधिक विद्हरुको दाबी छ ।
विशेषगरी लामो समयसम्म प्रयोग गरिरहनुपर्ने एपहरुले धेरै अगाडि नै डार्क मोड फिचर अपनाइसकेका थिए जस्तै भिडियो एडिटर , एडोब र ट्वीटरले २०१६ देखि नै डार्क मोड अपनाएको हो । केही समय अगाडि मात्र लोकप्रिय सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राम र युट्युबमा समेत यो फिचर जारी गरिएको छ ।
मोबाइलको ‘डार्क मोड’ आँखा र फोन दुवैका लागि राम्रो हो । डार्क मोड फोनको पोलराइजिङ फिचर हो ।
गूगलका अनुसार डार्क मोड फिचरले ब्याट्री सेभ गर्नुका साथै यसमा मोबाइल चालाउँदा आखाँको पीडा पनि कम गर्छ ।
गत अगस्टमा गूगलले डार्क मोड सहित एन्ड्रोइड टेन सार्वजनिक गर्‍यो । एप्पलले पनि आईओएस थर्टिनमा आफ्नै डार्क मोड सार्वजनिक गर्‍यो । मोबाइलमा रहेको सेटिङ एपमा गएर डिस्प्ले सेलेक्ट गरी डार्क थिम अप्सनमा टर्न अन गरी यो मोडमा फोन राख्न सक्नुहुन्छ । अथवा तपाईले आफ्नो फोनको सेटिङ मिलाउनुहोस् । यस अलावा तपाईं टपस्क्रिनबाट स्वाइप डाउन गरेर क्वीक सेटिङ प्यानलबाट नाइट थिम वा मोडमा टोगल गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
के तपाईंलाई थाहा छ ? बढ्दो प्रविधीको प्रयोग व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसले पूर्ण रुपमा निन्द्रा पाएका छैनन् । कतै तपाईं आफैँ यसको सिकार त हुनुहुन्न ? यदि त्यसो हो भने अनुसन्धानकर्ताले तपाईलाई यस्ता उपाय सुझाएका छन् ।
अनिद्राका कारण सम्झने शक्तिमा पनि कमी आउनुका साथै मानसिक अस्थिरता समेत निम्त्याउँछ ।